आश्चर्यको कुरा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले उत्तर कोरियालाई किन छोएन ? – Sandesh Munch
May 24, 2020 508
कोरोना भाइरसले संसारभर हजारौं मान्छे हताहत भइरहेको अवस्था छ । झण्डै १९९ देशमा यसको प्रभाव परिरहेको यो अवस्थामा संसारको कुनै यस्ता देशहरु होउन् जहाँ कोरोना भाइरसको असर नपरेको होस् । हो त्यस्ता देशहरुपनि छन् जहाँ हालसम्म यो भाइरसको प्रभाव परेको छैन । प्रश्न उठ्छ कसरी त्यो सम्भव भयो ? हो ताजकिस्तान, उत्तर कोरिया, तुर्कीमिनिस्तान, यमन, न्यु क्यालेडोनिया, न्यु सोलोमन द्विप, भानुआतु, अफ्रीकाको वेस्टर्न सहारा, सेरालियोन, साउथ सुडान, बोट्सवाना, लेसोथो, बुरुण्डी र मलविमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएका समाचारहरु आएका छन् । ती देशहरु टाढा भएर हो वा उनीहरुको बेग्लैखाले व्यवस्था भएर त्यहाँ यसको प्रकोप देखिएन ?
त्यो अनुसन्धानकै विषय हो । यहाँ कोरोनाले नछोएको एक देश मध्येको एक उत्तर कोरियाका बारे केही जानकारी दिने प्रयास गरिनेछ । उत्तर कोरिया नामको देशबारे सुनिरहेका संसारका धेरै मान्छेहरुलाई अचम्म लाग्छ । धेरै मानिसहरु उत्तर कोरिया बारे केही मिडियाले फैलाएका भ्रमहरु लिएर बाँचिरहेका छन् । संसारका धेरै मिडियाले यो देशलाई तानाशाहको देशकोरुपमा चित्रित गरिहेका छन् । तर जसरी ती मिडियाले उत्तर कोरिया बारे हल्ला फिँजाइरहेका छन् त्यस्तो चाहीँ होइन । खासगरी त्यसरी फैलाइएका भ्रमहरुमा त्यहाँका राष्ट्रपति तानाशाह हुन र सामान्य गल्तीमा पनि त्यहाँका मानिसहरुलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने प्रचार गरिन्छ । त्यसैगरी जनताको बोल्न र हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार बञ्चित गरिएको छ भन्ने हल्ला पनि गरिएको छ । तर उत्तर कोरिया घुमेर आएका धेरै नेपाली बौद्धिकहरु भने त्यस्तो हल्लालाई स्वीकार्दैनन् ।
आजको प्रसंग भने संसारभर कोरोना भाइरसले गरिरहेको मानव संहारबाट उत्तर कोरिया कसरी जोगिन पुग्यो ? भन्ने हो । संसार भर हजारौं मानिस मरिरहेको र लाखौं संक्रमित भएको यो अवस्थामा त्यो सानो देशमा भने कोरोनाले किन आक्रमण गर्न सकेन त ? सबैलाई अनौठो विषय बनेको छ । उत्तर कोरियामा हाल किम जोङ उन त्यहाँका सर्वोच्च नेता छन् । उनी कोरियाका निर्माता किम इल सुङका नाती हुन् । यसअघि उनका बाबु किम जोङ इल त्यहाँका सर्वोच्च नेता थिए । त्यहाँको राज्य प्रणालीबारे मानिसहरुले कुरा काट्न सक्ने ठाउँ भनेको यही नै हो ।
किन की त्यहाँ यसो हेर्दा राजतन्त्रात्मक प्रणाली जस्तो छ । तर इतिहासले त्यस्तो प्रमाणित गर्दैन । बरु त्यहाँका जनता उनीहरुलाई राष्ट्र निर्माताकोरुपमा सम्मान गर्छन् । १९५० देखि १९५३ सम्मको कोरिया युद्ध र युद्धको समाप्तिपछि पनि उत्तर कोरियाको नेतृत्व किम इल सुङले गरे । कोरियन वर्कर्स पार्टीको नेतृत्वमा त्यहाँ १९४५ मा जनवादी क्रान्ति भएको हो । क्रान्ति सम्पन्न भएपछि अमेरिकाले त्यहाँ आक्रमण गरेको थियो । अमेरिकाको लगातारको हवाइ तथा स्थलगत हमलाको शसक्त प्रतिरोधसँगै टुङ्गिएको लडाइँपछिको उत्तर कोरियाको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको अगुवाई सुङले नै गरेका थिए । उनले प्रतिपादन गरेको विचारधारालाई जुच्छे विचारधारा भनिन्छ ।
त्यही विचारधाराका आधारमा त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था लागु गरिएको छ । जुच्छे विचारधारा भनेको आत्मनिर्भरताको सिद्धान्त हो । सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुनु त्यहाँको विशेषता हो । सर्वोच्च नेता किम इल सुङको मुत्युपछि उनका छोरा किम जोङ इलले देशको सर्वोच नेता भए । उनकै पालामा पहिले कसैले नचिन्ने उत्तर कोरियाले त्यत्रो विकास गरेको हो । विकासकै निरन्तरतामा कोरिया हाल विश्वकै आणविक शक्तिसम्पन्न मुलुकमा गनिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर त छँदैछ । विकसित र अनुशासित कोरियाको नेतृत्व हालका नाती नेता किम जोङ उनले गरिरहेका छन् । केही मिडियाले उत्तर कोरियाको बारेमा प्रचार गरेजस्तो तानाशाही व्यवस्था नभएको त्यहाँ पुगेका नेपाली बुद्धिजीविहरुको भनाइ रहेको छ । उनीहरुको बुझाइमा उत्तर कोरिया सम्पन्न देश हो । अमेरिकाको इसारामा त्यहाँ विगत ३६ वर्षदेखि राष्ट्रसंघले नाकाबन्दी लगाएको छ । त्यहाँ पुगेर आएका नेपालीहरुका अनुसार नाकाबन्दी लगाएपनि कोरिया सरकारले त्यहाँका जनतालाई रोजागरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र इन्टरनेट जस्ता आवश्वयकताहरु निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । उनीहरुले सो व्यवस्थालाई कोरियाली विशेषताको समाजवादी व्यवस्था भनेका छन् ।
Prevअसत्य भन्दा सत्य नै किन बलवान छ ? सत्य सम्बन्धि ११ प्रेरणादायी भनाईहरु
Nextकोरोनाका कारण चर्चित चिकित्सकको मृत्यु
कस्ता ब्यक्तिको हातमा पटक्कैपैसा टिक्दैन